“ ဒီလောက် ထိ ဖြစ်ဘို့ လိုပါသလား ? “ “တောင်တွေးမြောက်တွေး အပိုင်းအစလေးများ နှစ်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » “ ဒီလောက် ထိ ဖြစ်ဘို့ လိုပါသလား ? “ “တောင်တွေးမြောက်တွေး အပိုင်းအစလေးများ နှစ်”	10
“ ဒီလောက် ထိ ဖြစ်ဘို့ လိုပါသလား ? “ “တောင်တွေးမြောက်တွေး အပိုင်းအစလေးများ နှစ်”
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jun 8, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary | 10 comments
“ ဒီလောက် ထိ ဖြစ်ဘို့ လိုပါသလား ? “
“တောင်တွေးမြောက်တွေး အပိုင်းအစလေးများ နှစ်”
အဲဒီနေ့က တော့ တကယ့်ကို စိတ်မောလူမော။
သူများကြောင့်မဟုတ် ကိုယ် ကြောင့်။
အဲဒီနေ့ ည ကိုးနာရီ ကားနဲ့ မန်းလေးကို ပြန်ဘို့ လက်မှတ်ကဖြတ်ပြီးသား။
ကျနော်ပြန်မယ့် နေ့မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူနဲ့တွေ့ဘို့ ချိန်းလာပါတယ်။
ကျနော်တည်းတာ က ဝေဇယန္တာလမ်းပေါ်က ဂန္ဓမာကုန်တိုက်နားမှာ။
သူနဲ့လဲဆုံရင်း စိန်ပန်းပင်နဲ့ ကရိဝိက်ကို တွဲပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုတဲ့
“နောက်ကျမယ် စိတ်မပူနဲ့ ကားချိန်မှီအောင်ပြန်လာမယ်”ပေါ့။
ကျနော်က တာမွေမှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုဝင်ခေါ်တော့ ညနေလေးနာရီ။
အဲဒီကနေ ရန်ကုန်ကန်တော်ကြီး ကရ၀ိက်အပေါက်
(အချို့ကတော့ အဲဒီနေရာကို တင့်ကားကုန်းလို့ခေါ်ပါတယ်)ကိုအငှားကား နဲ့
သူလဲလာနေပြီ ဒါပေမယ့် လမ်းပိတ်နေတယ် နည်းနည်းနောက်ကျမယ် ဆိုပြီးတော့ပေါ့။
အဲတော့လဲကိစ္စမရှိ ဓါတ်ဖမ်းရင်းစောင့်မယ်ဆိုပြီး ကန်တော်ကြီးထဲဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီဆိုင်လေးက ကန်နံဘေးမှာ အဆောင်လေးတွေဖွဲ့ပြီး
ဒါပေမယ့်ခပ်တည်တည်ဘဲ အဲ့ဆိုင်ထဲဝင်ပြီး စိန်ပန်းနီနီနဲ့ကရိဝိက်ဝါ၀ါကို
တွဲပြီးရိုက်လို့မှ သုံးလေးပုံ လောက်ဘဲရှိသေးတယ် မိုးတွေရွှာလာပါတော့တယ်။
ဒါနဲ့ဘဲ နီးတဲ့ အဆောင်တစ်ခုထဲဝင် ပြီး ဘီယာမှာလိုက်ရတော့တာပေါ့။
မိုးကလဲသဲသဲ မဲမဲ အငြိုးတကြီးနဲ့ရွာနေသလိုပါဘဲ။
ညနေငါးနာရီခွဲထိ ချိန်းထားသူကရောက်မလာတော့ မိုးလေးစဲတုန်းပြန်မယ်လို့တွေးနေတုန်း
ကျနော်က ည ကိုးနာရီကားနဲ့ပြန်မှာ ပြန်တော့မယ်လို့ပြောတော့
အပြန်မှာတာမွေက သူငယ်ချင်းက သူ့ကိုလိုက်မပို့နဲ့သူဘာသာသူပြန်မယ်ဆိုလမ်းမှာဆင်း။
ချော်တွင်းကုန်းအရောက်အိမ်က ဖုန်းဆက်လာပါတယ် ဘယ်ရောက်နေပြီလဲပေါ့။
လမ်းကတော့ ကျပ်မြဲ ကျပ်ဆဲပါဘဲ။
ဂန္ဓမာလမ်းနားရောက်ခါနီးတော့ အဲလမ်းက ကျဥ်းတော့
ကားကျပ်နေမယ်လို့ ထင်တာနဲ့ကွေ့မ၀င်တော့ဘဲ “လမ်းဝ”ဘက်ကနေလှည့်သွားဘို့
ဆင်းလမ်းလျှောက်လို့ကလဲ မရဆိုတော့ ကားဘီးကို
တလိမ့်ချင်းလာနေရင်းက စွယ်တော်တံတားကနေအောက်ဘက်ကို ဆင်းတော့ ရနာရီခွဲနေပါပြီ။
သိပ်မကြာခင်ရောက်တော့မယ်ထင်ပေမယ့် ကုန်းတံတား အောက်ကိုပြန်ဖြတ်ဘို့
ဒါနဲ့ဘဲ မီးပွိုင့် အလွန်မှ ပြန်ကွေ့လာလိုက်တာ အိမ်ရှေ့ရောက်တော့
ဒီအထဲမှာ မုိးက ရွာလိုက်တိတ်လိုက်။
အဲ့အချိန်မှာ ၈နာရီခွဲပေမယ့် အောင်မင်္ဂလာဝင်းထဲမရောက်သေးပါဘူး။
ပစ္စည်းတွေအပ်တော့ ကိုးနာရီ ထိုးဘို့ ဆယ်မိနစ်။
မိုးလဲရွာနေတော့ ကားပေါ်တက်ထိုင် စိတ်မောလူမောနဲ့မို့
ကားဂိတ်ထဲက ဆူညံ ဆူညံအသံတွေကြားတော့ ခေါင်းထောင်ကြည့်မိပါလေရော။
ခရီးဆောင်အိတ်ကို ပုခုံးမှာလွယ်ထားတဲ့ လူလတ်ပိုင်းတစ်ယောက်က
“မင်းတို့ ဂိတ်က မှားတဲ့ကိစ္စ ဖြေရှင်းပေး”လို့အော်ဟစ်ပြောနေသံကြားရပါတယ်။
“ခင်ဗျားက အော်ကြီးဟစ်ကျယ် မပြောပါနဲ့
“မင်းတို့ဘက်က မှားနေတာဘဲ ငါဒေါသထွက်ရင်
အဲဒီလူက ကားပေါ်ကိုတက်လာပြီး သူ့နေရာမှာသွားထိုင်နေပါတယ်။
ကြားသာကြားလိုက်ရတယ် သူတို့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကိုယ်ကလဲရေရေ ရာရာမသိ။
သိပ်မကြာခင် ကိုးနာရီထိုးလို့ ကားစက်နိုးပြီးထွက်မယ်အလုပ်မှာ
အစောကလူက “ကားမထွက်နဲ့ ခဏနေအုံး”လို့ပြောရင်း အပေါက်ဝဘက်ကို
“ငါကားပေါ်က ဆင်းပြီးနေခဲ့ရမှာလား မင်းတို့ဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုတာ ခုထိ ဘာမှပြန်မဖြေသေးဘူး”လို့
“မန်းလေးက မင်းတို့ပိုင်ရှင်ကို ငါဖုန်းဆက်ထားတယ်
အစောက ကိစ္စအတွက် မတောင်းပန်ရင်
ဖြေရှင်းမပေးရင် ငါ ကားပေါ်က ဆင်းနေခဲ့မယ်”
အဲအချိန်မှာ ကိုးနာရီ ငါးမိနစ်ရှိနေပါပြီ။
သူက ကားပေါ်က ဆင်းလိုက်ပါတယ်။
“မင်းတို့ဂိတ်က ငါ ဒေါသဖြစ်လို့အော်ပြောတာကို
မင်းတို့ဘက်က မှားတာကိုဖြေရှင်းမပေးရင်ငါမလိုက်ဘူး” လို့ပြောပြီး
“စောစောက ငါ့ကို ပြောတဲ့ လူ ကိုယ်တိုင် လာတောင်းပန်ခိုင်းပါ”လို့
“အကိုကြီး ကျနော်တို့ဘက်က မှားတာမဟုတ်ဘူး။
“နေပါဦး မင်းက ငါ့ကိုလာရှင်းပြနေတာလား
“ကျနော်က တကယ်ဖြစ်နေတာကို ရှင်းပြနေတာပါ” လို့ပြောနေရင်းက
“ကဲဗျာ ဟုတ်ပါတယ် ကျနော်မှားပါတယ်
“ ငါက ခရီးသည်တွေ အားနာလို့ လုံးဝကျေနပ်သေးတာမဟုတ်ဘူး”လို့ဆိုရင်း
အဲဒီအချိန်မှာ ည ကိုးနာရီနဲ့၁၇မိနစ်ရှိနေပါပြ၊ီ။
အဲတော့မှ သိလိုက်ရတာကတော့ ထိုင်ခုံနေရာမှားတဲ့ပြဿနာ
မောင်းလာရင်းကနေ စပယ်ယာ အသစ်လုပ်မယ့် ကလေး လေးကို
သူနဲ့တွဲလုပ်ရတဲ့ ဒရိုင်ဘာကြီးတွေဆီကနေ ကားမောင်း သင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း၊
ပညာလိုချင်ရင် နုတ်ချို ဖင်ပေ့ါ လေးလေးစားစားနဲ့နေတတ်ဘို့လိုကြောင်း၊
သူကိုယ်တိုင်လဲ ယာဉ်မောင်းတွေနားတဲ့အချိန် ကားကူရွှေ့ပေးရင်း
တစ်ခါတစ်ရံ ကူမောင်းပေးရင်းကနေ ဒရိုင်ဘာဖြစ်လာကြောင်း၊
အရင်က ဆို ရင် အဝေးပြေးကားမောင်းတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီး အားကျခဲ့ရကြောင်း
သူ့နံဘေးက ကား စပယ်ယာကြီးကလဲ အဲဒီလက်သင်လေးကို
ကိုယ်က စကားပြောပေးနေရင် ယာဉ်မောင်းလဲ အိပ်ငိုက်မှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း
ပြောရင်း အလုပ်တွေကို သင်ပေးလို့နေပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ဘဲ ည ဆယ်နှစ်နာရီ ကျော်ကျော်လေးမှာ ၁၀၅ မိုင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်းကို
ဒါနဲ့ဘဲ အပေ့ါအပါးသွားအစားအသောက်စားဘို့ နာရီဝက်ရပ်နားပေးမယ့်
အကြောင်း ပြောပြီး ကား ကို အစွန်ဘက်မှာရပ်လိုက်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ကားနားမှာရပ်နေတဲ့ယာဉ်အကူ ကို စုံစမ်းစပ်စု လုပ်ရပါတော့တယ်။
“ဒီလို အကိုကြီးရေ ဘတ်စ်သရီး မှာတက်မယ့်ခရီးသည်က
ခရီးသည်စာရင်းကို လိုက်စစ်တဲ့ကလေးမှလေးက လဲ
စောစောကလူ က တက်လာတော့ သူ့နေရာမှာ သူများထိုင်နေတယ်ဆိုပြီး
လာပြောမှ မှားနေတယ်ဆိုတာ သိရတယ်။
လုပ်ငန်းလုပ်တာ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် ဆိုပြီး ဂိတ်ထဲမှာ
အဖြစ်အပျက်ကို မသိသူတွေက ဂိတ်ကိုတစ်မျိုးထင်မှာလဲစိုးတော့
ဒီလူက ပေါက်ကွဲပြီး ပိုဆိုးသွားတော့တာပါဘဲ။
နောက် မန်းလေးက ပိုင်ရှင်ကိုတိုင်မယ် ဖုန်းနံပါတ်ပေးဆိုပြီးပြောလာတာနဲ့
သူက ဒီကိစ္စဖြေရှင်းပါ မရှင်းပေးရင် မလိုက်ဘူးဘာညာနဲ့ပြောပါတယ်။
ဖြေရှင်းပြီး ပြီလို့ ယူဆတော့
ကားထွက်မယ်လုပ်မှ ဒီလူက ထ ပြဿနာရှာတော့တာပါဘဲ။
ကျန်တာကတော့ အကိုကြီး လဲ မြင်နေကြားနေတဲ့အတိုင်းပါဘဲ။
ဒါပေမယ့်လဲ အဲလိုဖြစ်ရင် ခရီးသည်မကျန်ခဲ့စေရပါဘူး။
နာရီဝက်ပြည့်လို့ ကားထွက်မယ်လုပ်တော့ လူသုံးယောက်လိုသေးတယ်
လို့ အကူစပယ်ယာလေးက ပြောတော့ စပယ်ယာကြီးမှာ အလုပ်တွေရှုပ်ရပြန်ပါတယ်။
ဟိုနားသွားရှာ ဒီနားသွားရှာနဲ့ သူ့ခမျာ ဗျာများနေရှာပါတယ်.။
ဆရာတို့ ကြာလိုက်တာ နောက်ကျကုန်ပြီပြောတော့
“ကားရှာမတွေ့လို့” ဘာမှမဖြစ်တဲ့လေသံနဲ့ဖြေပြီး ကားပေါ်တက်သွားပါတယ်။
အဲတော့ မှ ကား လဲထွက်နိုင်ပါတော့တယ်။
နေ့တဒူဝ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေထိုင်ကြတဲ့ လူ့ဘ၀ကြီးထဲမှာ
ဖြစ်လာတဲ့အမှားက ကိုယ့်အပေါ်မှာ ကြီးမားစွာမထိခိုက်ရင်
ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်တိုင်လဲ စိတ်တိုရ ဒေါသဖြစ်ရ
ဘေးလူမှာလည်း နားပူရ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရ
ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ ပါတ်သက်နေတဲ့ တာဝန်ရှိသူမှာလဲ
အပြစ်ပေးခံရ အဆူခံရနဲ့ ဘယ်ဘက်ကမှ သက်သာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။
ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ ငယ်စဉ်က ဒေါသကြီးသူ
အဲလိုအခါမျိုးမှာ ကျနော့် အလုပ်ရှင်ဖြစ်သူက
“မင်းလာ သတ်တာမှ မဟုတ်တာကွာ
ဒါပေမယ့် ခွင့်လွှတ်သင့်တာလေး ကို ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်
အားလုံးလဲ အဆင်ပြေစိတ်ချမ်းသာမယ်လို့ တွေးနေမိပါတယ်။
လွဲချော်မူ့တိုင်းကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘဲ ဒေါသနဲ့သာတုန့်ပြန်နေရင်
ကိုယ်တိုင်ရော ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်ပါ ပူလောင်လှပါတယ်။
အခွင့်အရေး ရတာနဲ့ ထွက်ပြေးမှာအမှန်ပါဘဲ။
သူ့အနားမှာ ဘယ်တော့ မှ လူမြဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ပူလောင်ခြင်းရဲ့ဒဏ်ကို ဘယ်သူမှ ကြာကြာမခံနိုင်တာအမှန်ပါဘဲ။
အဲဒီနေ့က တော့ အစစနောက်ကျတော့ မန်းလေးအ၀င်မှာနောက်ကျပါတယ်။
မနက် 7နာရီထိုးခါနီးမှ ကားက မန်းလေးဘူတာကြီးကိုရောက်ပါတယ်။
ကျနော့်ကို လာကြိုပေးတဲ့ ရုံးက ကောင်လေး က
ကားလာမယ့် ဘက်ကို လှမ်းကြည့်နေတာကို မြင်နေရပါတယ်။
ကျနော့်ကို လာကြိုတဲ့ ကားပေါ်ရောက်မှ
“ည ကိုးနာရီကားဆိုတော့ မနက်ငါးနာရီကတည်းကရောက်နေတာ လေးလေး” လို့
ပြန်ဖြေသံကိုကြားမိတော့ သူ့ကို အတော်လေး အားနာသွားမိပါတယ်။
သူဝီရိယ ထားပါလျက်နဲ့ အခြားသူတွေရဲ့ မဆင်ခြင်မူ့ကြောင့်သူ့မှာအချိန်ကုန်ခံ
တစ်ခါတစ်ရံမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကြောင့် အခြားသူမှာ
သူများသာ ပြောနေတယ် အဲဒီလူ ကွိုင်တက်နေတဲ့အချိန် ကားအထွက်နောက်ကျတော့မှာကို
Mike says: .ကြုံရဆုံရဘုံဘ၀မှာကွယ်ပေါ့လေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေပါပဲ ကိုပေါက်ရေ
Alinsett @ Maung Thura says: ခရီးတစ်ခါထွက်တိုင်း ကြုံရတာတွေက တမျိုးပြီးတမျိုး
မရိုးသော အတွေ့အကြုံတွေပါပဲလေ ဆိုပြီး. . .
​ဒေါ် လေး says: တချို့လူတွေက ပြောမှသိ ထိမှနာ ဆိုသလို
တချို့လူကြတော့ လိုတာထက်ပို ဟောက်စား လုပ်ခြင်ကြတာ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဒီနှစ်ထဲမှာ နေရာအတည်တကျ မရှိဘဲ ခရီးတွေဘဲ ထွက်နေရတယ်ဆိုတော့
“ခြေတစ်လှမ်းအကွာက သူတို့နေရာ” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးရေးနေတာ အပိုင်း (၈)အထိပြီးနေပါပြီ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အကုန်လုံး လျှောက်မတင်နဲ့လေ။ လက်ထဲ ကုန်သွားမှာပေါ့
kai says: ဗမာမှာ.. တောင်းပန်/ ကျေအေး ဓလေ့..အလေ့အကျင့်ရဖို့တော်တော်လုပ်ယူရဦးမယ်..။
ခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့.. ဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းတွေကတဆင့်.. တောင်းပန်တာတော့ တော်တော်လုပ်လာကြတာသတိထားမိတယ်..။
နှုတ်ကဖွင့်ဟပြောဆို.. ကျေအေးတာကို.. တော်ယုံလူမလုပ်နိုင်ကြသေး..။
ဗုဒ္ဓကတော့.. ၀ိနည်းအရ.. ရဟန်းတွေမှားရင်.. အမှားလုပ်မိရင်.. အာပတ်ဖြေခိုင်းတယ်..။
ဘေးက… ရဟန်းတွေက.. (ကိုယ်နဲ့တိုက်ရိုက်မပါတ်သက်သည့်တိုင်) ကျေအေးကြောင်း.. ခွင့်လွတ်ကြောင်းပြောပေးတယ်..။
ကမ္ဘာ့လူသားယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းမှာ..ဗုဒ္ဓရဲ့ စနစ်တကျလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဒီဓလေ့ဟာ.. အစောဆုံးဖြစ်လောက်ပါတယ်..။
ဒီအလေ့အကျင့်ကို.. ခရစ်ယန်က.. အကုန်သိမ်းယူသွားသမို့.. ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်းတွေမှာ.. Confession လုပ်တာရှိတယ်..။
လူသတ်မိသွားရင်တောင်.. ဘုရားကျေင်းထဲဝင်ပြီး..ဘုရားသခင်ကို တောင်းပန်တယ်.. ။ တဖက်က.. ဘုန်းကြီးကလည်း..ကိုယ်စား ကျေအေးခွင့်လွှတ်ပေးတယ်..။
In Catholic teaching, the Sacrament of Penance is the method of the Church by which individual men and women may confess sins committed after baptism and have them absolved byapriest. Although it is not mandatory, the Catholic rite is usually conducted withinaconfessional box, booth or reconciliation room. This sacrament is known by many names, including penance, reconciliation and confession (Catechism of the Catholic Church, Sections 1423-1442). While official Church publications always refer to the sacrament as “Penance”, “Reconciliation” or “Penance and Reconciliation”, many laypeople continue to use the term “Confession” in reference to the Sacrament.
ဒီဓလေ့အကျင့်က.. လူမှုရေး…နိုင်ငံရေးတွေအထိကျယ်ပြန့်သွားတာမို့.. အောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံ.. လူမျိုးကြီးတွေဖြစ်လာတာပါပဲ..။
အခုကိုပေါက်အဖြစ်မှာလည်း..ကားဂိတ်ကတာဝန်ရှိသူတွေက… တောင်းပန်လာရင်.. (ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးမို့..) ခုံမှားပေးခံလိုက်ရတဲ့ စီးနင်းသူက.. ကျေအေးခွင့်လွတ်ကြောင်း..ပါးစပ်ကထုတ်ပြောလိုက်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်.။
ပြီးတော့.. သူရော.. စပယ်ယာရောက.. ကျန်ခရီးသည်တွေကို.. တောင်းပန်သင့်သပေါ့..။
အဲဒါဆို.. ဘယ်သူမှ.. ဒီလို အကုသိုလ်စိတ်တွေ.. အိမ်ပြန်မပါသွားဖူးပေါ့..။
Ma Ma says: တခါတလေမှာ ပြောတဲ့သူက သူမှားသွားမှန်းသိပေမယ့် ပြန်တောင်းပန်ရမယ့်အစား ရှက်ရမ်းရမ်းပြီး နောက်တနည်းနဲ့ထပ်ရစ်တာမျိုး ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရဖူးတယ်။
စိတ်ဆိုးမိပေမယ့် မနိုင်တော့လည်း သည်းခံရတာပဲ။
သဂျီးပြောတဲ့ တောင်းပန်ခြင်း ကျေအေးခြင်းဆိုတဲ့ အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ ဓလေ့အလေ့အကျင့်ကို သဘောကျတယ်။
uncle gyi says: ဘာပြောပြောစာရင်းမှတ်တာဂိတ်က
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အန်ကယ်ဂျီးရေ ဂိတ်တာဝန်ခံ က တောင်းပန်တာတောင် မပြီးတာပါ။